'' Aniga Iyo Saaxiibkay Barud Midkaayana Ma Qaldana ''.
Friday May 22, 2020 - 15:46:33 in Articles by Hadhwanaag News
Saaxiibkay Barud wuxuu shaqadda ka bilaabay macalinimo , ka dib macalinimadii master buu doontay , hadana wuxuu qaatay Phd isagoo ku diyaariyey Education planing .
Aniguna axmed ahaan , waxaan shahaadada koobaad ku qaatay Law , shaqadana waxaan ka bilabay Looyarnimo , ilaa hadeerna looyar uun baan ahay .waxa kale oo aan Diploomooyin yaryar ku qaatay History of war and war strategy in kastoo dadku aanay wada ogayn .
Yaraantaydii ayaan siyaasadda xiisaheeda ku biiray , xisbiyadana 2001 ayaan la jaanqaaday , saaxibkayse waxoogay buu iga yara danbeeyey .
Maxaaanu ku kala duwanahay .
Saaxiibkay mar walba aragtidiisu waxay ku salaysan tahay oo center u ah diyaarinta waxa uu odhanayo , siduu usoo diyaarinayo iyo siduu u habaynayo waayo xirfadiia ayaa sidaaas ah .
Aniguse aragtidayda waxaa saaman ku leh looyaranimadda iyo daraasadaha badan ee loolanadda , waxaana sal-dhig u ah gaadhista natiijadda iyo yoolka , maxaa yeelay looyarnimaddu waa dagaal aan naxariis lahayn .
Si kastaba ha ahaatee , looyarku wuxuu qanciyaa macmiilkiisa , waxaanu ku dadaalaa in macmiilkiisu guulaysto , prof wuxu ku dadaalaa in uu dadka oo dhan qanciyo , markaa aniga iyo saaxiibkay midkaayana ma qaldana maxaa yeelay anigu imika cidaan qancinayo waan garanayaa isna siduu dadka oo dhan u qancinayo wuu garanayaa .